Computer Technical Notes & Sharing Softwares: April 2009
To say that when you are away from sb that you love, you love them even more
-ဝေးကွာနေမှုက နှလုံးသားကို ပို၍ တသသ ဖြစ်စေတယ်။ (ဝေး တသက်သက်။)
2. There’s no accounting for taste.
Used to say how difficult it is to understand why sb likes sb/sth that you do not like at all
Whataperson actually does means more than what they say they will do.
-အလုပ်က အပြောထက် ပိုထိရောက်သည်။ (လူပြောမသန်၊ လူသန်မပြော)။
4. It’ll be all right on the night.
Used to say thataperformance, an event, etc. will be successful even if the preparations for it have not gone well
-At night နဲ့ by night က ပို၍ အသုံးကျယ်ပြန့်ပေမဲ့ on the night ကိုလည်း တစ်ခါတရံ သုံးကြသည်။ Eg. On the night of May 10 စသည်ဖြင့်ပေါ့။
5. The apple doesn’t fall/never falls far from the tree.
A child usually behaves inasimilar way to his or her parent(s).
-Far from (adv)=A long distance away=ဝေးဝေးသို့/မှာ/အထိ
6. If you cannot beat them, join them. If you cannot defeat sb or be as successful as they are, then it is more sensible to join them in what they are doing and perhaps get some advantage for yourself by doing so.
-လိုအပ်ရင် ရန်သူကိုလည်း မိတ်ဆွေဖွဲ့ပါ။
7. Beauty is in the eye of the beholder. People all have different ideas about what is beautiful.
8. Beauty is only skin-deep. Howaperson looks is less important than their character.
-အလှဆိုတာ အရေပြား တစ်ထောက်စာ။(လူလှဖို့ထက် စိတ်လှဖို့က ပိုအရေး ကြီးတယ်။)
9. You’ve made your bed and you must lie in / on it. You must accept the results of your actions.
-စိ်ိုက်ခဲ့သမျှ ရိတ်သိမ်းကြရ။ (ဘယ်သူမပြု မိမိမှု။)
10. Beggars can’t be choosers. People say beggars can’t be choosers when there is no choice and sb must be satisfied with what is available.
-အရက်ပြတ် ခွက်ကပ်လောက်နဲ့ မူးလိုက်ပေါ့။ “သန္တုဋ္ဌီစ= မရှိလို့ခြိုးခြံရတာလည်း မင်္ဂလာတစ်ပါး”လို့ သဘောထားလိုက်ပေါ့။
Used to say that sb will have to believe that sth is true when they see it, although they do not think it is true now
- ကိုယ်တွေ့ကြုံတော့ ယုံတာပေါ့ (ဒိဋ္ဌတွေ့မှ ယုံ)။
12. A bird in the hand is worth two in the bush.
It is better to keep sth that you already have than to risk losing it by trying to get much more.
- လက်ထဲက ငှက်တစ်ကောင်ဟာ ချုံထဲက ငှက်နှစ်ကောင်ထက် အဖိုးတန်ပါတယ်။
13. Blood is thicker than water.
Family relationships are stronger than any others.
- အရေးကြီးရင် သွေးနီး(စည်း)တယ်။
- (Thick ),thicker, (thickest) = ထူသော၊ ပျစ်ခဲသော ၊ ပို၍ထူ/ပျစ်သော၊ အထူ/ အပျစ်ဆုံး
- Thicker than =
Comparative Adj + than = ..... ထက်ပို…တယ်။ Eg. He is taller than me.
14. Born withasilver spoon in your mouth (You were born withasilver spoon in your mouth.)
- (မင်းက) ငွေဇွန်းကို ပါးစပ်ထဲကိုက် မွေးလာတဲ့အကောင်လေ။(မင်းက ရွှေလင်ပန်းနဲ့ အချင်းဆေး မင်းမွေးတဲ့ လူကိုကွ။ မိဘတွေက ကျိကျိတက် ချမ်းသာတဲ့ လူတွေကို ရည်ညွှန်းပြောဆိုသည်။)
- Born = Be born (used only in the passive, without by)= ( Passive Voice အဖြစ်သာသုံးပြီး by - နဲ့လည်းတွဲလေ့မရှိပါ)မွေးဖွားသည်။
မှတ်ချက် --- တစ်ချို့က born - ကို မွေးဖွားခြင်းကြိယာ Bear - ရဲ့ V3- လို့ထင်ကြတယ်၊ Bear - ရဲ့ ကြိယာပုံစံတွေက Bear(v1) bore(v2) borne(v3) bearing(v4) - တို့ဖြစ်ကြပါတယ်။ တကယ်တော့ born – ဟာ V3 - အဖြစ်နဲ့သာသုံးတဲ့ ထူးခြားတဲ့ ကြိယာတစ်လုံးဖြစ်ပါတယ်။
15. Boys will be boys.
You should not be surprised when boys or men behave inanoisy or rough way as this is part of typical male behavior.
- ယောင်္ကျား(လေး)တွေဟာ ယောင်္ကျား(လေး)တွေပါပဲ။ (မျောက်တွေ ဆော့တာ အပြစ်မဆိုသာ။ ဆူဆူညံညံနဲ့ ကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်း ပြုမူတတ်တာဟာ ယောင်္ကျားတွေရဲ့ပင်ကိုဗီဇဖြစ်လို့ အဲဒီလိုအပြုအမူမျိုးတွေကို တွေ့ရတဲ့အခါ တအံ့တသြမဖြစ်သင့်ပါလို့ ရည်ညွှန်းလိုတဲ့အခါမျိုးမှာ သုံးပါတယ်။)
16. When the cat is away the mice will play.
- ကြောင်မရှိ ကြွက်မြူး။
17. Charity begins at home.
You should help and care for your own family, etc. before you start helping other people.
- ဒါနဟူက အိမ်ကစ။
18. Every cloud hasasilver lining.
Every sad or difficult situation hasapositive side.
- (ညိုမည်းနေတဲ့) တိမ်တောင်တိမ်လိပ်တိုင်းမှာ ငွေရောင်အနားကွပ်လေးတစ်ခုတော့ ရှိမြဲပါ။ (ဆိုးဝါးခက်ခဲတဲ့အခြေအနေတိုင်းမှာလည်း ကောင်းကွက်လေးတစ်ခုတော့ ရှိမြဲပဲ။)
- Silver lining = တိမ်တောင် တိမ်တိုက်တွေမှာရှိတဲ့ အဖြူရောင် အနားသတ်
If too many people are involved in doing sth, it will not be done well.
ဆရာများ သားသေ (လူများ အီးများတာပဲရှိတယ်)။
- Too many =အလွန့်အလွန်များပြားသော
- Cook = ထမင်းချက်(သူ)
- Spoil = ဖျက်သည် ၊ ပျက်စီးစေသည်။
- Broth = thick soup made by boiling meat or fish and vegetables in water = ခပ်ပျစ်ပျစ် ဟင်းချို
20. Don’t count your chickens (before they are hatched).
You should not be too confident that sth will be successful, because sth may still go wrong.
- မပေါက်သေးခင် ကြက်ကလေးတွေကို မရေပါနဲ့ဦး။ သမီးရမှ ယောက္ခမကွ။
- Count = ရေတွက်သည်။
- Hatch = ဥမှ သားပေါက်သည်။
Posted by SLIP at 11:58 AM0comments
Posted by SLIP at 4:24 AM0comments